XIISAD ka dhex-dillaacday xubnaha boqortooyada reer Aala Sacuud ee Sacuudiga - Caasimada Online
Home Dunida XIISAD ka dhex-dillaacday xubnaha boqortooyada reer Aala Sacuud ee Sacuudiga
XIISAD ka dhex-dillaacday xubnaha boqortooyada reer Aala Sacuud ee Sacuudiga
Riyadh (Caasimada Online) – Iyadoo ay jirto kacdoon caalami ah oo ku aaddan dilka saxafiga Jamaal Khaashuqji, ayaa qaar ka mid ah qoyska reer Aala Sacuud waxay billaabeen kacdoon ka dhan ah in la difaaco dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan, sida ay Reuters u xaqiijiyeen ilo ku dhow dhow boqortooyada.
Boqor Axmed ayaa ku laabtay magaalada Riyadh bishii October kadib muddo uu ku maqnaa dibadda. Intii safarkaasi uu ku jiray, waxa uu u muuqday mid cambaareynaya hoggaanka Sacuudiga iyo dagaalka ay ka wadaan Yemen, isaga oo u jawaabayay banaanbaxayaal ku sugnaa halka uu ka daganaa duleedka magaalada London.
Qoyska reer Aala Sacuud ayaa ka kooban boqolaal amiiro ah. Si ka duwan boqortooyooyinka Yurub, ma jiro qad dhaxal oo degsan oo la maro marka boqor uu dhinta oo mid cusub uu xilka la wareegayo. Sidaas darteed, boqorka cusub waa mid laga wada xaajoodo. Wada xaajoodka noocaas ah ayaa dhabaha u xaari karaa in la doorto boqor ka duwan Bin Salmaan.
Si kasta oo ay ahaataba, amiiro badan ayaa carreysan, waxaana ay sugayaan inta uu boqorka ka geeriyoodo, taasi oo xiisad iyo dagala ka dhex qarxin karta boqortooyada reer Aala Sacuud.